सरकार फाल्ने कि भ्रष्टाचार ?
सरकार त नेकपाकै बन्ने हो----
काठमाडौं । संसदमा नेकपाको पूर्ण बहुमत छ । ५ वर्षसम्म कसैले पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकार फाल्ने नेकपाले हो, अर्को नेतृत्व स्थापित गर्ने पनि नेकपाले हो । ओली फालेर आउने को ? प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल ? यी तिनैजना टेस्टेड् भइसकेको व्यक्तिहरु हुन्, वामदेव गौतम चुनाव हारेका व्यक्ति, भीम रावल प्रभावशाली छन्, उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिने वातावरण छैन । अनि केपी ओलीको सरकार फालिहाल्नुपर्ने कसका लागि ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि हो भने केपी ओली फालेर सुशासन आउने प्रत्याभूति कसले दिनसक्छ ? नेकपा त्यही पार्टी हो, जुन पार्टीका होनहार नेता र होनहार युवाहरु पार्टीभित्रका गलत निर्णयहरु बोल्न सक्दैनन् । पार्टीभित्र गुट, उपगुट र खेमाहरु छन्, त्यसैमा रलमलिएर नेकपाका टुक्रिएर जोडिएको छ, जोडिएर टुक्रिएको छ, अनि केपी ओलीको ठाउँमा अर्को व्यक्ति स्थापित गर्दैमा तात्वीक अन्तर के हुन्छ ? फेरि सरकार फेर्ने संसदीय दलले हो, संसदीय दल पटक्कै राजीनामा माँग्दैन ।
काठमाडौं । इनफ इज इनफ । यो जनआवाज हो । यो आवाजले माँगेको जनताप्रतिको जवाफदेहीता हो, सुशासन हो । शासनमा व्यक्ति फेरिदैमा सुशासन आउने होइन, सुशासनका लागि आचरण फेरिनुपर्छ, आचरण फेरिन्न भने व्यक्ति परिवर्तनले भ्रष्टाचार रोकिएला ?
मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती, असार १४ गते । प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट शव्दमा भनिदिएका छन्–मलाई हटाउनका लागि भारतले होटलदेखि दूतावाससम्म बैठक गराइरहेछ । पार्टि संसदीय दल बहकाउमा लाग्दैन, सरकारबाट हटाउने सपना कसैले नदेखे पनि हुन्छ । अर्थात भारतले र भारतीय इसारामा राजनीति गर्नेहरुले सरकार फेर्ने सपना नदेखे हुन्छ ।
हो, सत्य हो, नेकपा संसदीय दलबाहेक कसैले सरकार फेर्न सक्दैन । संसदीय दलले केपी ओलीको राजीनामा माँग्ने हिम्मत गरिसकेको छैन ।
तर प्रधानमन्त्रीले भारतीय इसारामा होटलहरुमा सरकारविरोधी बैठक बसिरहेको कुराले नेकपाभित्र भारतीय इसारामा चल्ने नेता को को रहेछन् भन्ने संशय बढाएको छ । साथै, जसले राजीनामा माँग्छ, उनीहरु भारतीय इसारामा चल्ने प्रमाणित हुनेछन् ।
यथार्थ के पनि हो भने भारतले ओली सरकारसँग वार्ता गर्न चाहेको छैन, वार्ताबाट भारत भागिरहेको छ ।
हुन त भारत चीनसँग लद्दाखमा युद्धकै माहोल बनाइरहेको छ । चीन कम बोले पनि भारतले नेपाल र पाकिस्तानमाथिसमेत चीनको इसारामा चलेको आरोप लगाइरहेको छ । भारतका रक्षामन्त्री रुसको समर्थन र हतियार लिन रुस पुगे, यति नै बेला अमेरिकाले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना मार्न रुसले पैसा दिएको आरोप लगाएर रुस र अमेरिकावीच पनि तनाव बढेको छ । अमेरिकी भरमा भारत चीनसँग लड्न र नेपाललाई अमेरिकी रणनीतिमा पारेर कालापानीक्षेत्र खाने मूडमा देखिन्छ, जुन मुस्किल छ ।
यता सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठक, स्थायी समिति बैठक बोलाएपछि देखाइदिन्छौं भन्ने प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको बोली बोल्ने नेकपाका अन्य सांसद, नेताहरु स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको छ, राजीनामा माँग्न नसकेर बोल बोल मछली मुखभरि पानी भइरहेका छन् । प्रचण्ड निकै सावधानीपूर्वक अस्पष्ट रणनीतिमा देखिन्छन् ।
बैठक आज पनि छ, उही लल्लरी बिल्लरी चलिरहेको छ । एमसीसीको झोल कि बीआरआईको चौटाको विषयमा बहस हुनसकेको छैन । बीआरआई किन नेपालका लागि हितकारी छ, एमसीसी के कति कारणले नेपालको अहितमा छ भनेर न नेकपा स्थायी समिति सदस्यहरुले सोधेका छन्, न सरकारले नै पास गर्न यसकारण जरुरी छ भनेर प्रष्ट्याउनु परेको छ ।
सरकार भ्रष्टाचारी भयो, भ्रष्टाचार बढायो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेका छैनन् । १० गते सुरु भएको बैठकमा ७ एजेण्डा छन्, ती एजेण्डाको बहस र पार्टी संगठनात्मक रुपमा चल्ने र सरकारले क्षमता देखाएन भन्ने कुरामै यो बैठक सिमित हुने देखिन्छ । हो, प्रधानमन्त्रीले राज्यलाई भ्रष्टाचार र व्यभिचारको भुमरीमा पारेका छन्, बिधिमा चलाउन नसक्नु नेकपाको अक्षम्य असफलता हो ।